Antoine Griezmann Oo Real Madrid Ku Wargaliyay In Uu Iska Diidi Doono Barcelona Si Uu Iyaga Ugu Biiro Hadii Ay Shan Shardi Ka Soo Baxaan – Kooxda.com
Home 2018 January Spain, Wararka Maanta Antoine Griezmann Oo Real Madrid Ku Wargaliyay In Uu Iska Diidi Doono Barcelona Si Uu Iyaga Ugu Biiro Hadii Ay Shan Shardi Ka Soo Baxaan
Antoine Griezmann Oo Real Madrid Ku Wargaliyay In Uu Iska Diidi Doono Barcelona Si Uu Iyaga Ugu Biiro Hadii Ay Shan Shardi Ka Soo Baxaan
January 13, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Atletico Madrid ee Antoine Griezmann ayaa kooxda Real Madrid u sheegay in uu iska diidi doono in uu ku biiro kooxda Barcelona kuba biiri doono Los Blancos hadii ay diyaar u yihiin in ay fuliiyaan shan shardi oo uu hor dhigay.
Griezmann ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Real Madrid iyo Barcelona, ​​iyadoo mustaqbalkiisa Atletico uu u muuqdo ku jiro.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska, oo sidoo kale lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqi doono Premier League Manchester United, ayaa laga yaabaa inuu ka tago kooxda Diego Simeone kadib markii ay ku fashilmeen in ay koob ku guulaystaan sanadihii ugu dambeeyay.
Bilihii ugu dambeeyay kooxda Barcelona ayaa noqotay kooxda ugu cad-cad saxiixa saxiixa ciyaaryahanka iyada oo Griezmann u argta bedelka Luis Suarez.
Si kastaba ha ahaatee, Diario Gol ayaa sheegay in ciyaaryahanka uu diyaar u yahay inuu iska Barcelona si uu ugu saxiixo Madrid – laakiin kaliya hadii ay kooxdu diyaar u tahay in ay la kulanto dalabaadkiisa.
Weeraryahanka ayaa diyaar u ah in uu ku biiro Real Madrid hadii loo balan qaadayo boos joogto ah oo kooxda 1-aad ah.
26 jirk ayaa sidoo kale doonaya in laga caawiyo sidii uu u rumayn lahaa riyadiisa ah in uu ku guulaysto abaalmarinta Ballon d’Or.
Xiddiga ayaa sidoo kale doonaya in uu helo mushahar dhan 10 milyan sanadkii si uu u sii joogo caasimada Madrid uguna Biiro Los Blancos.
Griezmann ayaa sidoo kale sheegay in uu doonayo balan qaad ah in ay kooxdu si fiican ugu jiri doonto una xoojin doonto kooxda.
dalabka ugu dambeeya ee xiddiga ayaa ah in kooxdu la soo saxiixato xiddigo waaweyn oo khibrad fiican leh oo kooxda ka caawin kara in ay koobab ku guulaysato.